2 iiGeofumadas kubhabho kunye nokunxibelelana oku-6-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-2 Geofumadas kwi-fly and 6 links
cadastreGeospatial - GISGPS / IzixhoboMicrostation-Bentley
Uhambo olude, iintsuku ezintathu bendikhenketho, kunye nokutya okumnandi kwesiCreole. Okokugqibela ubuyile, uninzi lwee-imeyile ezingafundwanga kunye nekhamera entsha ye-Kodak 12.2 megapixel isebenza kakuhle kakhulu.
Apha ndishiya ezinye iimvavanyo kunye neendaba ezenza umdla:
I-Bentley idlulisela ukusebenzisana kwi-FME.
Inomdla kakhulu, i-Bentley Imephu iye yadibanisa ithuba lokunxibelelana kwedatha ngokusebenzisa ETL de Software Safe. Ngento onokuyifunda ngaphezu kwe-250 ifom I-CAD, i-GIS, iRaster kunye noovimba beenkcukacha. Iindaba azininzi kangako kubasebenzisi beBentley, kodwa kwamanye amaqonga athi kude kube ngoku, funda i-dgn V8 kodwa ii-pcocos (okanye akukho) zikhankanyile ukufunda idatha ye-xml kwiprojekthi yeMephu yeBentley.
I-Bentley ne-AutoDesk zide zide sayine isivumelwano ukuphucula ukusebenzisana, isihloko esithi ngale ndlela bayiphumelelayo ukwenza iBentley Imephu inxibelelane ne-AutoDesk Civil 3D. Kubonakala ngathi yeyona ilungileyo Izigqibo zikaBentley, kuba i-ETL isebenza njenge-adaptha yotshintshiselwano, zombini ukulayisha (umthwalo), ukukhupha (ukukhupha), kunye nokuguqula (ukuguqula) ulwazi ngendlela yendawo, leyo iSoftware ekhuselekileyo isebenza kakuhle kakhulu. Iinkampani ezahlukeneyo zenza ngale ndlela, kubandakanya:
Isebenza ngeenguqulelo eziqala nge-Bentley Imephu SELECT Series1, Oko kukuthi, i-V8.11.7 ikhutshwe ngo-Novemba ka-2009. Apha ungabona ividiyo ukuba isebenza njani.
2. Ikhosi kwirhafu yokuThengisa izindlu
I-Lincoln Institute ivakalise iNkcazo yoPhuhliso loPhuhliso loPhuhliso lweRhafu yeTropati yaseLatin America.
Oku kuya kubakho kwi-23 ukuya kwi-30 ka-Ephreli ye-2010 e-Costa Rica, ekhuthazwa yiQumrhu lokuQinisekiswa koBugcisa (i-ONT) ye-Regularization Programme yeCadastre kunye neRegistry yaseCosta Rica.
Inkqubo, ngokusekelwe kwimeko yecala, ngokusekelwe kwimeko eqhutyelwayo eKosta Rica kwaye, kunye ne-exchange classroom exchangeroom, kunye nabathathi-nxaxheba bevela kumazwe ahlukeneyo, kulindeleke ukuba bafumane iziphumo ezixabisekileyo kwimingeni enzima efana nale:
Iintsebenziswano phakathi kwentlawulo yepropati kunye nezinye iintlawulo
Iimodeli zemali zengingqi; yerhafu yerhafu yepropati
Iiprojekthi zokulungiswa kwakhona kweepadastra kunye nemizila yokuhlaziywa kwedatha okuqhubekayo
Ukuvavanya okukhulu kunye nokulawula umgangatho wemisebenzi
Ukuxhatshazwa kokulwa (ukuqokelela kunye nokubuyiselwa kwamatyala)
Izalathisi zokusebenza ukuhlola ukusebenza kwentela
Kwaye mna ... ndifuna ukuya.
6 Iindawo eziphakanyisiwe kule veki
I-IGN kunye ne-CNIG ikhuphela ukukhuphela kwedatha ye-cartographic data
Izixhobo / iinkonzo zobunjineli kunye nokwakhiwa.
Ikhosi yeGeomarketing ibonakala iyona enexabiso eliphezulu.
Abahlobo abangenasiphelo, i-geofuman kweso sifundo ngendlela enkulu.
Izikhululo zeGPS zehlabathi kwimaphu
Iidolophu ezilahliwe zaseSpain
Iimveli ezintsha ze-10 ze-ArcGIS 10
I-Translia, inkonzo yoguqulo lobungcali
Iminyaka eli-120 yeLizwe yeJografi